चीनको भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रायल ! नेपाली सहित ३१ हजार जना सहभागी - Sacho Post
२०७७ भाद्र १६, मंगलवार १०:१३ बजे
काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनको ट्रायल गरिएको छ । चीनको नाइना नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप कर्प अर्थात सिनोफार्मले विकास गरेको भ्याक्सिनको तेस्रो र अन्तिम चरणको ट्रायल युएइमा गरिएको हो । यो ट्रायलमा ३१ हजार जना स्वयंसेवक सहभागी थिए । यी स्वयंसेवकमध्ये नेपाली पनि थिए तर नेपालीको संख्या कति थियो भन्ने खुलासा भइसकेको छैन ।
खलीज टाइम्सका अनुसार ६ हप्तामा यी सबै स्वयंसेवकलाई भ्याक्सिन लगाइएको हो । अब स्वयंसेवकको लागि नाम दर्ता बन्द गरिसकिएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वयंसेवकहरुको संख्या पर्याप्त भइसकेकोले नयाँ स्वयंसेवक दर्ता बन्द गरिएको बताएका छन् । भ्याक्सिन लगाउने स्वयंसेवकहरु नेपालसहित १२० भन्दा धेरै देशका नागरिकहरु छन् । स्थानीय अधिकारीहरुले कम समयमै भ्याक्सिनेशनको लक्ष्य पूरा गरेकोमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरु र स्वयंसेवकहरुको प्रशंशा गरेका छन् ।
अबु धाबीका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल हौवेसले भने कि कोरोना महामारीका विषयमा सरकार सुरु देखि नै विश्वव्यापी सहभागिताको साथ काम गरिरहेको छ । सोमबार कोरोनाभाइरसका कूल केस संख्या २ करोड ५४ लाखभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
आज कुन देशको मुद्राको भाउ कति होला ? हेर्नुस् विनिमयदर